Lahatsoratra nampiasa ny teny miverina matetika: Tiko	Miverena Fanatanterahana didim-pitsarana – Mandà ny hiditra ao amin’ny Tiko ireo vadintany ao Antsirabe Tsy misy mety manatanteraka ilay didy fanokafana ny orinasa Tiko ao Andranomanelatra sy Mahafaly ireo vadintany ao Antsirabe. Vokatr’izany dia tsy mety tontosa ny fanaovana tombam-bidy ireo entana eo anivon’ity orinasa ity, hahafahana manao ny lavanty handoavana ireo hetra ambara ho tsy voaloan’ny Tiko. Efa dodona ny ho amin’izany anefa ny foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny Hetra.
Fitakian-ketra – Mandeha ny fifampiraharahana avo lenta momba ny Tiko Efa tonga tao Antsirabe, saika hanatanteraka ilay didy hanaovana fanagiazana ny orinasa Tiko ao Andranomanelatra sy Mahafaly omaly ny
Tiko Andranomanelatra – Niandry ireo mpitaky hetra ny mpiasa Efa hatramin’ny talata lasa teo no tonga tsy tapaka manoloana ny orinasa Tiko ao Andrano- manelatra ireo mpiasa ao amin’ity orinasa ity. Sora-baventy mampiranty ny tokony hamerenana ny fihodinan’ny orinasa iasan’izy ireo no nolanjain’ izy ireo teo anoloan’ny orinasa Tiko. Nanampy isa azy ireo ihany koa ireo tantsaha very tombon-tsoa noho ny fahapotehan’ny Tiko. Anton’izao fihetsika izao ny filazana fa ho tonga hanatanteraka didimpitsarana, ka hanokatra sy hitaky ny trosany ao amin’io orinasa io ny avy ao amin’ny foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny hetra (Dgi).
Efa ny zoma teo no voalaza fa ao Antsirabe ny ekipan’ny Dgi. Miandry ireo mpitandro ny filaminana hanohana azy kosa izy ireo vao hanatanteraka ny didy, raha ny fantatra.
Fandraharahana – Tsy hogiazana ny Tiko raha mandoa ampahan-ketra « Raha tsy mandoa ny ampahan-ketra tokony haloany amin’ny Fanjakana ny orinasa Tiko, sady tsy mametraka tetiandro mazava amin’ny fandoavana ireo tambin-ketra dia tsy maintsy hiroso amin’ ny fitakian-ketra an-tery, amin’ny alalan’ny fanaovana lavanty ireo entana ao amin’ ny Tiko ao Andranomanelatra sy ao Mahafaly ao Antsirabe, ny foibem-pitondrana misahana ny Hetra (Dgi) », hoy Tazafy Armand, Tale jeneralin’ny Hetra.
« Miankina amin’ny Dgi sisa dia afaka miditra ao amin’ ny orinasa Tiko izahay. Efa nanome alalana am-bava ho amin’izany rahateo ny orinasa Tiko », hoy kosa ny vadintany miandraikitra ny fanatanterahana ny didy, raha nanazava ny fitarazohan’ ny fanatanterahana ny didy.
Kely finoana amin’ny fampiatoana io didy io ny Tiko satria efa nilaza izy ireo fa tsy manana ny vola handoavana io ampahan-ketra io.
Fitsarana – Resy ny orinasa Tiko, hiditra ao Andranomanelatra ireo mpitaky hetra Fahadisoam-panantenana. Endrika maloka no nandraisan’ireo mpiasan’ny Tiko, tonga niandry ny didim-pitsarana navoakan’ny tribonalin’Anosy omaly, mahakasika ny ho avin’ity orinasa ity ao Mahafaly sy Andranomanelatra ao Antsirabe. «Nohamafisin’ ny Fitsarana ny didy hitsivolana manome alalana ny Foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny Hetra hiditra ao amin’ny orinasan’ny Tiko ao Antsirabe. Resy teo anatrehan’ny Fitsarana isika…», hoy i Heritiana Andrianaivo, tale jeneralin’ny Magro nanoloana ireo mpiasa tetsy amin’ny Fitsarana omaly maraina.
3 000 ny fitambaran’ny mpiasan’ny Tiko tao Antsirabe no tsy maintsy natsahatra tsy niasa taorian’ireny raharaha 2009 ireny, araka ny tarehimarika nomen’i Heritiana Andrianaivo. Mbola maro ireo nanantena ny hiverina hiasa raha nandeha ny resaka teo aloha fa haverina hahodina ny orinasa ao Andranomanelatra.
Ankehitriny anefa dia efa afaka miroso amin’ny fanatanterahana ilay didy hitsivolana amin’izay ny Foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny Hetra (Dgi) na hangataka fandravana didy aza ny Tiko. Nanamafy rahateo i Armand Tazafy, Tale jeneralin’ny Hetra fa «hotanterahina ny didy satria efa ny Fitsarana no mamela anay hiditra ao».
«Hetra mitentina Ar 107 000 tapitrisa no nambara fa trosan’ny Fanjakana aminay», hoy ihany i Heritiana Andrianaivo. Hijery izay rehetra azo giazana sy hatao lavanty ao Andranomanelatra ny Dgi hanonerana izany.
Ho an’ireo mpikambana ao amin’ny ankolafy Ravalomanana dia tsy mifanandrify amin’izay voalazan’ ny tondrozotra izao zava-miseho izao. Manantena ny fampitsaharana ny fanenjehana izy ireo, ary tokony hisy aza ny fanoneran’ny fanjakana ny fahavoazana nihatra tamin’ireo orinasa voaroba tamin’ny raharaha 2009.
Antsirabe – Ho fantatra ny 23 mey ny ho avin’ny Tiko Afaka herinandro. Amin’ny alarobia ho avy izao no hivoaka ny didim- pitsarana mahakasika ny fampiharana ilay didy hitsivolana mamela
Marimaritra iraisana – Nandamoka ny diniky ny samy mpanao politika Tsy tanteraka omaly indray ny fivo- riana nokasain’ireo vondrona sy antoko ary ankolafy politika izay tokony nandinihana ny fomba fampi- harana ny sori-dalana. «Maro amin’ ireo mpanao politika manana andraikitra ao anatin’ireo rafi-panja-kan’ny tetezamita no mamita iraka ivelan’ny renivohitra, ka tsy afaka nanatrika io fivoriana io», hoy fotsiny ny fanazavana avy amin’ny sekretera nasionalin’ ny antoko Tgv, Lanto Rakotomavo, omaly.
Ny mpitarika ny delegasionan’ny ankolafy Ravalomanana, Mamy Rakotoarivelo ihany aloha no fantatra fa tsy eto an-toerana fa mamita iraka any Frantsa. Na izany aza dia maro amin’ireo minisitra avy amin’ity ankolafy ity no fantatra fa diso fanantenana tanteraka noho ny tsy fahatanterahan’ity fivoriana ity. Ireto farany izay niandrandra mafy ny hahitan’ny rehetra ny marimaritra iraisana amin’ny fampi- harana ireo andininy mamaritra ny fampodiana tsy misy araka-raka ny mpanorina ny orinasa Tiko.
Ireo vondrona sy antoko politika akaiky ny Filohan’ny teteza-mita, Andry Rajoelina anefa hatramin’ny omaly dia mbola nani- zingizina fa tsy hanohy hiatrika ity fivoriana ity mihitsy raha tsy miverina mandray ny andrai-kiny ao anatin’ireo rafitry ny tetezamita ny ankolafy Rava-lomanana.
Fanefana hetra – Nohamafisin’ny Fitsarana ny fanagiazan’ny Fanjakana ny Tiko Nivoaka omaly ny didim-pitsarana mikasika ny raharahan’ny orinasa Tiko miisa roa any Antsirabe. Nomen’ny Fitsarana tany an-toerana rariny ny fanjakana malagasy mikasika ilay didy hitsivolana nivoaka ny 260AG/12, ny 16 avrily 2012, ka manome alalana ny foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny Hetra (Dgi) hiditra ao amin’ny faritra misy ny Tiko ao Andranomanelatra sy Mahafaly ao Antsirabe. Fanatanterahana ny fitakian-trosa an-tery mahakasika ny hetra nambara fa tokony hoefain’ny orinasa Tiko io didy hitsivolana io.
Nolavin’ny Fitsarana araka izany ny fangatahana fanoherana nataon’ny orinasa Tiko an’ io didy hitsivolana io. Horakoraka ny an’ireo olona 300 mahery teo ivelan’ny Fitsarana raha vao nandre ny didim-pitsarana tao Antsirabe tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany maraina omaly.
Nahitana mpiasan’ny orinasa, mpiompy omby, mpamboly voankazo sy soja ireo olona teo ivelan’ny lapan’ny Fitsarana sady nilanja sora-baventy, izay naneho ny « tokony hamelana azy ireo hiasa » sy ny « tokony hisian’ny mangarahara amin’ny fitsarana io raharaha io ». Narovana mpitandro ny filaminana vao maraina ny teny amin’ny manodidina ny Fitsarana.
« Tsy tokony hihatra aloha io didy hitsivolana io raha tsy mivaly ny fampiakarana Fitsarana ambony nataonay », hoy i Heritiana Andrianaivo, tale jeneralin’ny Magro raha nivoaka ny lapan’ny Fitsarana. Teo no ho eo ihany mantsy dia efa nampiakatra ny raharaha ny Me Noro Raharimalala, mpisolovava ny orinasa Tiko. Ireo mpitandro ny filaminana avy aty Antananarivo anefa efa an-dalan’ny hihazo an’Antsirabe ny maraina hanatanteraka ny didy. « Voatery naverin-dalana izy ireo noho ny didy izay nanaovana fampakarana », hoy ny kolonely Bama Marima, lehiben’ny tobim-paritry ny Zandarimaria ao Vakinankaratra.
Tsy mbola nanan-kambara ihany koa ny teo anivon’ny Dgi raha nanontaniana ny fepetra horaisiny. « Tsy maintsy mbola hisy fifampidinihana amin’ny sampana misahana ny lalàna eto anivonay aloha vao ho fantatra ny ho atao », hoy i Tazafy Armand, tale jeneralin’ny Hetra.
Hanitry Ny Aina/ Angola Ny Avo
Raharaham-pitsarana – Mandindona ny mety fanagiazan’ny Fanjakana ny Tiko Eo am-pelantanan’ny Fitsarana ny ho avin’ny orinasa Tiko ao Andranomanelatra sy Mahafaly ao Antsirabe. Hamoaka ny fanapahan-keviny taorian’ny fanoherana ny didy hitsivolana laharana 260AG/12 nataon’ny Tiko mantsy ny Fitsarana ao Antsirabe, ny zoma ho avy izao.
Na mijanona ho an’ny Tiko ireo orinasa ireo aorian’io na giazan’ny Fanjakana. Ka raha ny Fanjakana no mandresy dia hiroso amin’ny fanaovana lavanty izany sy ny fitaovana ao anatiny izy ireo mandra-pahafeno ny trosa ambara fa tokony hoefain’ity orinasa ity amin’ny Fanjakana. Nanamafy anefa i Tojo Ravalomanana omaly fa « tsy maintsy ho tafatsangana ny orinasa Tiko ».
Dingana fanerena handoa hetra
Loharanom-baovao teo anivon’ny foibem-pitondrana misahana ny Hetra no nahalalana fa tafiditra ao anatin’ny dingana fitakian-trosa ataony io fanagiazana sy fanaovana lavanty io. « Efa tapitra ny fe-potoana nirosoana tamin’ireo dingana hafa toy ny fanagiazana ny kaonty, ny famelana ny orinasa hiodina mba hahafahany mamerina ny trosa. Tsy mbola voaverina anefa ny trosa hatreto », hoy ny loharanom-baovao.
Sotasota, fanapotehana amin’ny endriny rehetra ny orinasa Tiko, fikasana hanao tantely afa-drakotra ny orinasa toy ny niseho tao Toamasina no andraisan’ireo tompon’andraikitry ny Tiko ny zava-miseho ankehitriny. « Satria tsy mitombina ny kajin’ny ampahan’ny hetra sy haba takiana ary nohamarinin’ny vaomieran’ny hetra misahana ny fangatahana momba ny fitantanan-draharaha na ny Cfra izany », hoy Ratsimbazafy Faliniaina, tale ara-bolan’ny Tiko.
Nampiany fa tokony honerana araka ny voalazan’ny Tondrozotra aloha ny fahavoazan’ireo orinasa voaroba tamin’ny 2009, ka isan’izany ny Tiko.